That's so good, right?: Sperm and Semen သုတ် နဲ့ သုတ်ရည်
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၆၅)
Apr 23, 2011 at 8:39 PM
အမျိုးသားလိင်အင်္ဂါက ထွက်လာတဲ့ အကြည်ရောင် ချောကျိကျိ အရည်မှာ သုက်ပိုးပါပါသလား။ ပါမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက် ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပါတတ်ပါသလဲ။ အဆိုပါ အကြည်ရောင် အရည်ကြောင့် ကိုယ်ဝန် ရသွားနိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကော သုတေသန ရှိပါသလား။
ယောက်ျား တယောက်ဟာ Sexually stimulated လိင်စိတ်ကြွလာတာနဲ့ Seminal vesicles နဲ့ Prostate gland တွေကနေ Seminal fluid အရည် ထွက်လာတယ်။ အရည်ဆိုတာထဲမှာ Sperm သုတ်ပိုး ရောနေနိုင်တယ်။ (ပညာပိုင်း အခေါ်ဝေါ်တွေကို နောက်မှာ ရေးထားပါတယ်။)
Semen ကိုလဲ သုတ်ရည်လို့ ခြုံခေါ်နေကြတာ များတယ်။ ဆေးပညာ တတ်သိသူတွေကပါ သုံးနှုန်းကြတယ်။ Bulbourethral Glands တွေကနေ ထုတ်ပေးတဲ့ အချွဲရည်ဟာ Lubrication လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ အသုံးဝင်တဲ့ ချောဆီ သဘော ဖြစ်တယ်။ တိတိကျကျ ပြောရရင် Semen ဆိုတာ Sperm မပါတဲ့ အရည်သာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ အရည်ဟာ သုတ်မလွှတ်ခင် ထွက်တာမို့ Pre-ejaculate ကနဦး-အရည်လို့ ခေါ်မှ မှန်တယ်။
Sympathetic nerves (ဆင်ပသက်တစ်) အာရုံကြောတွေကနေ လိင်ဆန္ဒ ပြည့်ဝချိန်မှာ Ejaculation သုတ်လွှတ်တာ လုပ်ပေးတယ်။ သုတ်လွှတ်လိုက်ရင် Prostate gland ဆီးကျိတ် နဲ့ Seminal vesicles အိတ်တွေကနေ အရည်တွေ ပိုထုတ်ပေးလာတယ်။ Orgasm လိင်ဆန္ဒ ပြည့်ဝချိန် ကြာလေလေ အရည်များလေလေ။ အသက်ငယ်သူတွေမှာ ပိုများတယ်။ လူ ၃ဝ ကို စမ်းသပ်တာ ပျမ်းမျှ သုတ်ရည် ထုထည် 3.4 ml ရှိကြတာ တွေ့ရတယ်။ အများဆုံး 4.99 ml နဲ့ အနည်းဆုံး 2.3 ml ရှိတယ်။ သုတ်ပိုးပေါင်း 100 to 600 million ပါနေမယ်။
1. Seminal vesicle = 65-75% (Seminal vesicles ဆိုတာ နာမယ်ကိုက Semen ထုတ်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါတယ်။ ဆီးအိမ် နောက်နား-အောက်နားမှာ အတက်ကလေးတွေလို ရှိတယ်။)
ကျား-အစိနောက်မှာ Epididymis ဆိုတာ ရှိတယ်။ ရှေးခေတ် ဂရိ-စစ်သား ဆောင်း (ဟဲလ်မက်) နဲ့ ဆင်တယ်။ ပေ ၂ဝ လောက် ရှည်ပေမဲ့ နေရာ ကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ ခွေနေလို့ သုတ်ပိုးတွေ များများ လှောင်ထားနိုင်တယ်၊ ကြီးရင့်လာဘို့ အချိန် ရစေတယ်။ ထိရင်-ကိုင်ရင် နာမယ်၊ ပိုးဝင်ရင်လဲ ရောင်တယ်။ အဲဒါရောင်တာကို Epididymitis ခေါ်တယ်။ အစိပါရောင်ရင် Epididymo-orchitis ခေါ်တယ်။ ကလေး၊ လူကြီး ဖြစ်တယ်။ Antibiotic ဆေးပေးရတယ်။ ဆေးမကုဘဲ ထားရင် Sterility ကလေးအဖေ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
• Semen သုတ်ရည်က (အယ်လ်ကာလိုင်း) ဖြစ်တယ်။ ထူးဆန်းတာက အမျိုးသမီး (ဗဂျိုင်းနား) ဟာ အက်စစ်ဓါတ် ရှိတယ်။ Spermicide သုတ်ပိုး-သေဆေးတွေကလဲ အက်စစ်ဓါတ် ရှိတယ်။
• Sperm စစ်စစ်မှာ အရသာ မရှိဘူး။ Seminal fluid အရည်ကတော့ ချိုနိုင်တယ်၊ ခါးနိုင်တယ်။ တချို့မှာ ငန်တယ်။ အစားသောက်ပေါ် မူတည်တယ်။ အသားစားရင် ခါးပြီး၊ သက်သတ်လွတ်ဆိုရင် ချိုတယ်။ ချိုရတာက Fructose သကြားဓါတ်ကြောင့် ဖြစ်တယ်။
သုတ်ရည်ရဲ့ တခြားကောင်းကျိုးတွေလဲ ရှိပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါ ခံစားနေရသူ အမျိုးသမီးတွေဟာ သုတ်ရည်ကြောင့် စိတ်သက်သာ ရစေလို့ Antidepressant သတ္တိရှိတယ်။ ကောလိပ်-ကျောင်းသူ ၂၉၃ ယောက်ကို သုတေသနတခု လုပ်တယ်။ ဆက်ဆံတဲ့အခါ (ကွန်ဒွမ်) မသုံးတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ လက်ရှိ အဖေါ်ယောက်ျားနဲ့ ခွါပြဲသွားရင် နောက် အသစ်တယောက်ကို မကြာမတင် ရှာချင်တာ တွေ့ရတယ်။ သိပ္ပံသမားတွေက သုတ်ရည်ကို Chemical dependency ဆေးစွဲသလို Rebound effect ဖြစ်တယ်လို့ ကောက်ချက် ချတယ်။ ဒီလို မိန်းကလေးတွေက ဒီအကျင့်မျိုး ရှိနေတာကိုးလို့ အရပ်စကား ပြောကြမှာဘဲ။
သုတ်ကို ပါးစပ်က မျိုချတာမှာ Health risks ကျန်းမာရေးအရ ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ။ အန္တရာယ် မရှိလှပါ။ အမျိုးသမီး ပါးစပ်မှာ အနာအဆာ ရှိမှသာ HIV နဲ့ Herpes ရေယုံပိုးတွေ ဝင်နိုင်တယ်။ ယောက်ျားမှာ Human papillomavirus (HPV) ကြွက်နို့ ဗိုင်းရပ်စ် ရှိနေရင် Oral or Throat cancer ခံတွင်းနဲ့ လည်ချောင်း-ကင်ဆာတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများနိုင်တယ်။
ခေတ်ဟောင်း ပညာရှင် Aristotle ကလဲ ဆိုခဲ့သေးတယ်။ "သုတ်ရည်ဆိုတာ အစာအဟာရထဲက ကောင်းပေ့ ဆိုတာကနေ ရတာ" တဲ့။ ခေတ်သစ် လှို့ဝှက်-ထောက်လှမ်းရေးမှာ သုတ်ရည်ဟာ Invisible ink မမြင်နိုင်တဲ့ မင်လို သုံးနိုင်တယ်။
ယဉ်ကျေးမှု မတူတာတွေမှာ မတူတဲ့အမြင်တွေ ရှိကြတယ်။ ဗမာတွေက "ချွေးထွက် များမှ သွေးထွက် နည်းမယ်" လို့ ပြောကြတယ်။ တရုတ်-စကားပုံတခုကတော့ "သုတ်တစက်ဟာ သွေးဆယ်စက်နဲ့ ညီတယ်" တဲ့။ "ကျောက်မျက်ရတနာ Gemstones တွေဟာ Drops of divine semen ဘုရားသခင်ကပေးတဲ့ သုတ်ရည် Celestial Dragon နဂါးမင်းက ဆင်းသက်တာလို့ ယုံကြည်ကြတယ်။
ယောက်ျားတွေဟာ ဒို့မှာသာ ဒါလုပ်နိုင်တယ်လို့ အတင်း ဂုဏ်ယူချင် မနေကြပါနဲ့။ ရိုးရာ ရုရှား-ဆေးပညာကဆိုတာ မှန်တယ်။ "သုတ်ရည်ဆိုတာ ယောက်ျား နဲ့ မိန်မ အကြား ဆန်းပြားလှတဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ရဲ့ ရလဒ်တခု ဖြစ်တယ်" တဲ့။ အနည်းဆုံး စိတ်ကူးထဲ၊ အိပ်မက်ထဲမှာ မိန်းမ ပါမှသာ သုတ်ရည်ဆိုတာ ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 5:59 PM